2015 – Gentleman Magazine
ဆီးထိန်းခြင်း၏ အကျိုးအပြစ်များ ဆီးထိနျးခွငျး၏ အကြိုးအပွဈမြား ထိုင်ရာက မထနိုင်လောက်အောင် အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပေါ့အပါးသွားချင်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား ? ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ အပေါ့သွားချင်တာကို အောင့်ထားတာက သင့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားကို တိုးတက်လာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ လှုံ့ဆော်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဆီးသွားချင်နေပေမယ့် မသွားပဲအောင့်ထားတာက ရုတ်တရက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကို
သင် ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဆက်မလိုက်သင့်တော့တဲ့ အခြေအနေ လက္ခဏာများ
သင် ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဆက်မလိုက်သင့်တော့တဲ့ အခြေအနေ လက္ခဏာများ သငျ ကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးကို ဆကျမလိုကျသငျ့တော့တဲ့ အခွအေနေ လက်ခဏာမြား စွန့်လွှတ်ဖို့ သင်ယူရတာ လွယ်ကူတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ သင် စိတ်ဝင်စားနေသူက သင့်ကို ပြန်စိတ်မဝင်စားရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးအတွက်
အထီးကျန်မှုကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်မလဲ ? အထီးကနျြမှုကို ဘယျလိုဖွဖြေောကျမလဲ ? လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ရုံးပတ်ရက်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေခဲ့သလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးက အလုပ်များနေတာ ခရီးဝေးသွားနေကြတာနဲ့ မအားလပ်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခြားမြို့တစ်ခုမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး စကားစမြည်ပြောဖို့ ဒါမှမဟုတ် အနားက စားသောက်ဆိုင်သစ်တစ်ခုကိုသွားပြီး မြည်းစမ်းကြည့်ရင် ကောင်းမလား
မိန်းမတိုင်း သုတ်ရည် ပန်းထုတ်နိုင်ပါသလား မိနျးမတိုငျး သုတျရညျ ပနျးထုတျနိုငျပါသလား “Squirting” ဆိုတာ ဘာပါလဲ။ မိန်းမတိုင်း လုပ်နိုင်ပါသလား။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ဆရာဝန်တွေက ဖြေပေးထားပါတယ်။ မိန်းမခန္ဓာကိုယ်ဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ G Spot ရှိမရှိကို ငြင်းသူတွေက ငြင်းနေကြတုန်းမှာ မိန်းမ သုတ်ရည် ပန်းထွက်ခြင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးလဲ
အမျိုးသမီးတွေ သစ္စာဖောက်ရသည့် အကြောင်းရင်း အမြိုးသမီးတှေ သစ်စာဖောကျရသညျ့ အကွောငျးရငျး အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်သူတွေက ပိုပြီးတော့ ဖောက်ပြန်တတ်ကြပါသလဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက အဖြေရှာ ငြင်းခုံနေကြတာလည်း ကြာပါပြီ။ Cheating website တစ်ခုက ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရတော့ အမျိုးသားတွေက ပိုပြီးတော သစ္စာဖောက်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၇၈ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ခေတ်မီနေဆဲ ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်း ၁၇ ခု ၇၈ နှဈ သကျတမျးရှိတဲ့ စာအုပျတဈအုပျထဲက ခတျေမီနဆေဲ ခမျြးသာဖို့နညျးလမျး ၁၇ ခု ၁၉၃၇ ခုနှစ်က ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Think and Grow Rich ထဲက
သင့်ကောင်မလေး ရဲ့ ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၂ သွယ် သငျ့ကောငျမလေး စိတျကွှစဖေို့ နညျးလမျး ၁၂ သှယျ သင်ကတော့ မီးဖိုချောင်ထဲက ရှောက်သီး ၂ လုံး မြင်တာနဲ့ လိင်ကိစ္စကို စဉ်းစားမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့ အဲ့လောက် မလွယ်ပါဘူး။ သူမရဲ့ ဦးနှောက်ကနေ လိင်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့
သင့်ချစ်သူကို မဆုံးရှုံးစေပဲ သင့်အိပ်မက်နောက် ဘယ်လို လိုက်ရမလဲ သငျ့ခဈြသူကို မဆုံးရှုံးစပေဲ သငျ့အိပျမကျနောကျ ဘယျလို လိုကျရမလဲ ဘဝဆိုတာ စစ်မြေပြင်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကူအညီမပါရင် ဘာအောင်မြင်မှုကိုမှ မရယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို အလုပ်ပိုကောင်းအောင် လုပ်မိစေဖို့ တိုက်တွန်းချက်တွေဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကထက် ချစ်သူဆီက လာတာ
ဘ၀မှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ
ဘ၀မှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ ဘဝမှာ မလုပျသငျ့တဲ့ အရာမြား ၁။ မပျင်းပါနဲ့ ပျင်းရိနေတာက အချိန်ကုန်စေပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မနေပါနဲ့။ လုပ်စရာရှိတာ အခုပဲ ထလုပ်လိုက်ပါ။ ၂။ ဘ၀ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရှောင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ ဘ၀ကို ပုံပြင်စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ သဘောထားပါ။ တစ်ချို့စာမျက်နှာတွေ မရှိဘူးဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကိုမှ
သူမအတွက် ပေးဆပ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)ခု သူမအတှကျ ပေးဆပျဖို့မထိုကျတနျတဲ့ လက်ခဏာ (၁၀)ခု ချစ်သူစုံတွဲဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့နေတယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ တစ်ဖက်ဖက်မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက် ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ အကျိုးမဲ့ကုန်ဆုံးမသွားစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူမအကြိုက်ကို အလိုက်ဆောင်ရင်း သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေ
အားလုံးမှားတတ်ကြသည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမှား(၆)ခု အားလုံးမှားတတျကွသညျ့ ငှကွေေးစီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ အမှား(၆)ခု သင် ကြိုးစားရှာဖွေထားတဲ့ ၀င်ငွေတွေ ဘာမှအဖတ်မတင်ပဲ ကုန်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ နောင်ရေးအတွက် စုဆောင်းလို့ မရလို့ အခက်တွေ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ အမှားအယွင်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လစဉ်အသုံးစရိတ်အလျှင်မှီဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ရေးအတွက် ကြိုတွေးပြီးစုဆောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးစုဆောင်းတာ၊